Tsena karbôna : mitaky itsinjarana ara-drariny ny vola ny any Toamasina | NewsMada
Tsena karbôna : mitaky itsinjarana ara-drariny ny vola ny any Toamasina
Vola azo avy amin’ny fananana velaran’ala maitso ny tsena karbôna. Mitaky ny fitsinjarana azy hifanandrify amin’ny toerana nahazoana azy ny any Toamasina, manana ny Tandavanala Ankeniheny –Zahamena (Caz).
Atrikasa nandritra ny telo andro teto Toamasina nanomboka ny alakamisy 23 jolay ary nifarana ny asabotsy 24 jolay teo. Nentina nampahafantarana sy nakan-kevitra tamin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ireo mpiandraikitra rehetra, mikasika ny rafitra “Redd+” eto Madagasikara amin’ny fikajiana ny tontolo iainana sy hampihenana ny entona manimba ary ny varotra karbôna eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, izay efa nahavitana fikarohana ny ala arovana eto amintsika.
Samy namoaka ny heviny ny mpandray anjara rehetra, ka nivoaka taorian’izay ny fametrahana ny rafitra “Redd+” eto amin’ny faritra Atsinanana, Toamasina. Tanjona ny hanara-maso sy hametraka ny paikady rezionaly, handrafetana ihany koa ny paikady nasionaly. Nambaran’ny mpandray anjara rehetra tamin’izao atrikasa izao ny fizarana ara-drariny ny vola ho azo amin’ny famarotana ilay antsoina hoe “crédit carbone”, noho i Toamasina mampiantrano ny tandavan’ala Ankeniheny – Zahamena (CAZ), afaka mandevona ity entona karibaonina ity hatrany amin’ny 70 tapitrisa t/km2 araka ny fanadihadiana farany natao.
Andrasana ny valin-tenin’ny Cites
Ankilan’izany, nohararaotin’ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny haivoary ala, ny Dr Ndahimananjara Johanita, nanazava mikasika ireo hazo sarobidy fa efa vita ny lalàna mikasika izany sady nivoaka ny didy fampiharana azy, noho ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavin’ny fanjakana malagasy.
Efa namaly sy nandefa ny tatitra nangatahan’ny Cites koa ny fanjakana Malagasy, ny 8 jolay 2016, ary mbola handefa ny tatitra faharoa ny 25 jolay teo. Eo am-piandrasana ny valin’ireo tatitra eo anivon’ny Cites ny fanjakana malagasy izany izao.